Enina avy ny tsara indrindra Noise-Manafoana ny écouteur - News Fitsipika
Avy Bose ny mitempo, dia hanombana ny am-bifotsy afaka fanakatonana ny izao tontolo izao ary koa ny fanaovana ny mozika mihira
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Hushed feo: enina amin'ireo tsara indrindra ny fanafoanana tabataba-écouteur” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa ilay Mpandinika ny Alahady faha-3 Jona 2018 08.00 UTC
Bose dia iray amin'ireo mpisava lalana ny feo-ny fanafoanana ny teknolojia ary matetika hoderaina ho toy ny tsara indrindra eo amin'ny raharaham-barotra. Ny QC35 II no fanontana faharoa ny orinasa Wireless feo-ny fanafoanana kapoaka ka nametraka ny fenitra izay olon-drehetra dia refesina.
Tsara ry zareo, tsy ho an'ny mpanao ny fanafoanana feo (ANC) fa matoantenin'ny atao (tabataba nosakanan'ny ny famolavolana ny écouteur, fa tsy amin'ny alalan'ny feo milalao Ambient) koa, izay toerana mpifanandrina sasany tsy mahatratra. Bluetooth fifandraisana tsara, fa manohana ihany AAC fa tsy hafa HD peo endrika, ny tariby no raha mila izany sy ny bateria Maharitra manodidina 20 ora amin'ny zava-drehetra nivadika tamin'ny.
Manana miavaka, mafy maso "Bose" feo, izay indrindra, fa tsy ny rehetra no tia. Ny fampiharana Bose mamela anao mba handa na hiala amin'ny ANC, raha hamafin'ny feonao sy ny fanaraha-maso eny an playback tsofina ankavanan'ilay kapoaka. Ny zavatra ny bokotra amin'ny ankavia mitalaho Google Assistant na toggles feo ny fanafoanana.
Izy ireo, ary mahazo aina ianao fahazavana, somary kely na understated ny lohany, aforeto ho Travel ary ampy ho tafavoaka velona maharitra andro-to-day commuting.
Didim-pitsarana: Ry zareo tsy tena toy ny endri-javatra-manan-karena tahaka ny sasany, fa ry zareo aina kokoa sy manana feo tsara indrindra ny fanafoanana.
Sennheiser ny PXC 550 dia kely nefa matromatroka ny mijery. Ihany koa ry zareo fa tsy mba tahaka comfy tahaka ny sasany. Fa satria fahazavana sy Airy rehefa somary tonta, ry zareo tsara kokoa handraisana ireo isika amin'ny sofiny lehibe.
The PXC 550 Manana ny toetra Sennheiser soundscape malalaka, izay toa tsy noho ny mpifanandrina mivantana. Izy ireo tsy kely hery amin'ny electronica, ary ny basse loham tokony hijery any an-kafa, fa ny sakafo ara-panahy izy ireo gitara sy ny feo vocals fab.
Sennheiser ny fampiharana mamela anao hanitsy ny haavon'ny feo ny fanafoanana, hanova ny EQ sy hiverina amin'ny manan-tsaina Pause, izay mijanona ny mozika rehefa maka azy tokoa. Indrisy, mba mahay Pause miasa reliably tsy maintsy hiandry roa segondra Rehefa miala ny écouteur eo alohany dia hametraka izany eo amin'ny. Nanome anareo hampody azy tamin'ny sy eny amin'ny Nandika vilana ny earcups an-toerana mahazo haingana manorisory. Tsofina ankavanan'ilay kapoaka manana saropady mikasika-pad - Peho dia miato, swipe tsara sy niala tamin'ny firesahana, na niakatra sy nidina hanitsy boky. Ny jiro mitodika feo-ny fanafoanana eny, ho fanitsiana mavitrika mifototra amin'ny tabataba, na any amin'ny ambaratonga indrindra, raha ny bokotra amin'ny alalan'ny feo tsingerina fiantraikany toy ny hoe "Club", "Sarimihetsika" sy ny "teny".
Noise-Manafoana ny tsara, fa tsy tena amin'ny feh amin'ny Bose sy Sony, indrindra eo amin'ny isan'andro niraharaha izay mitolona mba hanakana avy feon'ny namany mpandeha sy Feon'inona fiarandalamby.
The PXC 550 hanohana aptX for Bluetooth sy avy amin'ny tariby. Ny bateria maharitra manodidina 30 ora eo ny fiampangana sy ny écouteur aforeto ho lavitra.
Didim-pitsarana: A maharitra safidy malalaka amin'ny soundscape.
Bowers & Wilkins px, £ 329
Ny manao écouteur ianao dia afaka ny ho fanambarana. Raha toa ianao manao B&W px ianao milaza fa tianao ny écouteur hijery toy ny feo izy ireo, be tsara kokoa, vy-rijan fitaovam-piadiana, platinina hevitra misongadina sy ny lamba rakotra earcups sy ny fehiloha.
Ny px Tsy mampideradera, fa mijery bebe kokoa toy ny £ 300-miampy hametraka ny écouteur avy yesteryear noho ny plastika mamirapiratra ny mitempo taranaka.
Hitako fa mba hahazo ny tsara indrindra avy ao aminy no anananareo ny crank azy mafy, izay karazana nandresy ny hevitra ny manana tabataba-Manafoana ny. Ihany koa ry zareo kokoa voakasiky ny tabataba-Manafoana ny, izay miova ny feon'ny miharihary ny ratsy, rehefa niverina tamin'ny.
Noise Manafoana ny tsara amin'ny nitsahatra nivezivezy milina, nefa tsy tena araka izay tsara toy ny hafa eo amin'ny toerana na ny niraharaha. Mitana ny rivotra izy ireo ny tsara indrindra amin'ny rehetra, na izany aza.
The B&W fampiharana mamela anao ampanjifaina ny tabataban'ny ny fanafoanana ny "birao", "Tanàna" sy ny "sidina", anisan'izany ny haavon'ny feo Ambient aoka ny alalan '. Bokotra eo amin'ny fanaraha-maso tsofina ankavanan'ilay kapoaka playback SY BOKY FAHA-. Nitondra azy ireny ny fiatoana ny mozika, -dry zareo raha hanaiky mozika ny Bluetooth amin'ny fanohanana aptX HD, analogue tariby na ny USB-C.
Mahatsapa izy ireo mavesatra sy tsy dia mahazo aina noho ny mpifanandrina, amin'ny thinner, mafy kokoa izay manenjika fisaka sy mivelatra amin'ny lafiny roa eo amin'ny lohanareo hentitra kokoa. Tsy heny teo ho lavitra na.
Didim-pitsarana: Izy ireo mijery haneno lehibe sy be raha tianao ny mozika tena mafy.
Sony ny ambony-of-ny-tsipika feo-ny fanafoanana écouteur tsy manana snappy anarana, fa entana tena totohondriny. Izy ireo ny tsara indrindra arguably Bose mpifanandrina azo vidim-bola, mifanandrify amin'ny faneva mpitondra in-Manafoana ny feo. Inona no manampy Sony dia kely feo tsara kokoa, anisan'izany ny HD sy ny hi-peo Res fanohanana ny Bluetooth, ary maro ny customization safidy toy ny tabataba-ny fanafoanana izay azo ahitsy na tanana, na avy hatrany.
Ny fampiharana finday avo lenta koa dia mamela anao hanova ny hita fitarihan'ny feo: mba hanaovana azy tahaka ny feo mozika avy any eo anoloan'ny eo aminareo, na aoriana, na manodidina. Misy koa equalizer feno.
Ny marina dia aza manendry izay earcup-saro-pady - paompy mba hiato kely roa na milalao, swipe miakatra na midina hanitsy boky, na ankavia na zo dinganina lalana. Manarona ny mikasika-faritra mora amin'ny tanana ary fantsona Ambient feo any an-écouteur mba hahafahanao mandre fanambarana na mitovy. Ny jiro teo amin'ny ankaviany sofina kapoaka koa miala Ambient feo amin'ny na eny.
Ny bateria maharitra manodidina 30 ora ary aforeto ho Travel ary tena mahazo aina ho an'ny vanim-potoana omena fihainoana. Ny lafy ratsiny dia hoe ry zareo lehibe kely noho ny Bose QC35, dia tsy manazava be amin'ny fitaovana roa mifandray tamin'izany andro izany, ary tsy tena araka izay tsara amin'ny rivotra rehefa mifandray amin'ny tabataba.
Didim-pitsarana: Tsara raha te endri-javatra bebe kokoa, na tsy tia ny fomba feo Bose.
Plantronics BackBeat Pro 2, £ 230
Na dia tsy tena mora, Ny BackBeat Plantronics Pro 2 Wireless manolotra feo-ny fanafoanana ny £ 100 kely noho ny tsara indrindra amin'ny fitsaharana sy ny tena anjara ianao dia tsy ho afaka ny hilaza.
Manana mendrika napetraka ny fanaraha-maso teo ivelany. Pause, lalana Skip, feo-ny fanafoanana SY BOKY FAHA-jiro miaraka mihazakaza dial rehetra teo amin'ny ankavia kosa kapoaka, raha ny marina dia manana bokotra atao amin'ny afo ny virtoaly mpanampy, ny hery jiro sy ny mikrô moana bokotra. Ento izy ireo ho any miato ny mozika, nataony indray hanomboka azy io indray.
Noise-Manafoana ny tsara, nefa tsy tena tsara indrindra-in-kilasy, famelana ao amin'ny birao kely kokoa noho ny Bose resaka na Sony. Battery fiainana tena tsara 24 ora eo ho, fa maka manodidina ny telo ora handidy rehefa fisaka.
Ny Plantronics Tena mahazo aina ny hitondra, na dia ho an'ny vanim-potoana maharitra, amin'ny lehibe, plush sofina kaopy sy ny fehiloha tsara padded, nefa tsy aforeto ny, ny sofina ihany no miodina kaopy ho fisaka.
Raha tianao basse amin'ny tabataba-Manafoana ny, Ireo no ireo ho anao: izy ireo ny lalina indrindra misy eto basse. Izany dia midika hoe mafy maso ka tsy hanimba ny sisa amin'ny mozika, nitsoka lehibe amin'ny thumping basse andalana.
Didim-pitsarana: Tsara sy ny tsara lalina feo basse ny fanafoanana ny tsy.
mitempo Studio 3 Wireless, £ 300
Ny taranaka fahatelo-Mamono Studio 3 Wireless dia dingana teo aloha teo ambonin'ny dika ny Dr Dre ny feo-ny fanafoanana écouteur. Misy amin'ny izy ireo ianao amin'ny loko isan-karazany sy ny kaopy lehibe manana ampy handraisana ny ankamaroan'ny-tsofina.
Ry zareo tena mafy ny lohany, tsy misy fihodinan'ny ao amin'ny kaopy, izay midika hoe tsy tonga akaikin'ny Bose na Sony ho an'ny rehetra-andro mihaino fampiononana. Izy ireo no aforeto ny, fa tsy fisaka toy ny ankamaroan'ny olon-kafa, ary mety ho kely creaky ry zareo isaky ny misokatra.
Fanaraha-maso teo ivelany dia somary tsotra. Misy lehibe noho ny bokotra mitempo hifehy playback, miafina bokotra ambony sy ambany fa ny boky fanaraha-maso, ary ny hery ny bokotra. Tsindrio ny bokotra hery indroa mba vonoy ny feo-ny fanafoanana, mihazona ny mitempo famantarana ny afo ny Siri na Google Assistant mikasika ilay finday Android.
Miasa tsara izy ireo amin'ny smartphone Android sy ny milina Windows, fa tsara kokoa ny vokatra amin'ny Apple noho ny orinasa W1 Chip. Fotsiny izy hampody azy eo akaiky ny iPhone sy ny pairing no zaraina eo Apple fitaovana hafa mety ihany. Izy ireo manohana AAC-peo ny Bluetooth, amin'ny fifandraisana mafy amin'ny tranga rehetra.
Ny mpanao horakoraka-Manafoana ny tsara, fa tsy amin'ny feh amin'ny Bose sy Sony, famelana in more commuting tabataba. Ny écouteur manana manokana "Mamono" feo, izay mavitrika sy mavesatra amin'ny tapaky ny basse, mampifanaraka Pop fa tsy tena Ambient electronica.
Didim-pitsarana: Lehibe raha manana iPhone, fa tsara kokoa fampiononana, feo sy ny tabataba- ny fanafoanana misy any an-kafa.
Ahoana no miasa ...
Mikrô ny écouteur Ambient mamantatra feo hizotra ho any ny sofinao. Ny rafitra avy eo mitendry no mitifitra ny mifanohitra ireo amin'ny alalan'ny onjam-peo tsy niriana ny écouteur. Ny onjam-peo hihaona sy hanafoana ny hafa teo anatrehan'i mikapoka ny eardrum. Izany dia tokony lazaina ho mavitrika feo-Manafoana ny (ANC); tabataba nosakanan'ny ny famolavolana ny écouteur Voalaza fa feo-Manafoana ny matoantenin'ny atao.
19251	0 mitempo Studio 3 Wireless, Bose QC35 II, Bowers & Wilkins px, Plantronics BackBeat Pro 2, Sennheiser PXC 550, Enina avy ny tsara indrindra Noise-Manafoana ny écouteur, Sony WH-1000XM2